Izindaba - UMnu Chen Wenjun, iSekela leNhloko eQondayo yeBinjiang kanye neKomidi Lezokuphatha laseGaoxin Area Vakashela Inkampani iMeari
UMnu Chen Wenjun, iSekela leNhloko eliPhambene leBinjiang kanye neKomidi Lezokuphatha laseGaoxin Area livakashele Inkampani iMeari ukuyokwazi imininingwane yayo eyisisekelo nentuthuko ngomhla ka-4.th , Dis. 2020. Isikhulu esiphezulu sikaMeari u-Yuan Haizhong, iMenenja Jikelele u-Ying Hongli, i-Vice-General Manager u-Wang Fan, u-Jin Wei, u-Qin Chao no-Gong jie bathola uMnu u-Chen.
UMnu Chen uvakashele iHholo Lomkhiqizo WakwaMeari ukuze azi kabanzi ngemikhiqizo kaMeari, abalingani kanye namandla okuncintisana njll. Ukhombise ukubonga ngocwaningo nentuthuko kaMeari. Ngasikhathi sinye, i-CEO kaMeari yenza isingeniso esinemininingwane.
UMnu Chen Wenjun uthe, "UMeari angasibamba lesi sikhathi esibalulekile ukuqinisa ubuchwepheshe bemikhiqizo yasekhaya ehlakaniphile, asheshise ukunwetshwa kwemboni futhi athuthukise amandla kaMeari wokuncintisana"
UMnu Yuan Haizhong uzithokozile iziphakamiso zikaMnu Chen futhi wabelana nokuthi uMeari uzoqhubeka ekwakheni ucwaningo lobuchwepheshe, ahlanganise izinsizakusebenza ezihambisanayo futhi athuthukise ngemikhiqizo yasekhaya.
UMnu Chen Wenjun, wenze isithombe nethimba likaMeari.